Qoorqoor oo iska diiday inuu mar kale u kala dab qaado Farmaajo & Rooble | Dhacdo
Home Wararka Maanta Qoorqoor oo iska diiday inuu mar kale u kala dab qaado Farmaajo...
Qoorqoor oo iska diiday inuu mar kale u kala dab qaado Farmaajo & Rooble
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ayaa caga-jiid ka muujiyay inuu dib u bilaabo dadaaladii uu isugu soo dhaweynayay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Dadaaladaasi ayaa guuldareystay habeenkii Jimcaha, ka dib markii labada dhinac aanay wax tanaasul ahi ka muujin qodobo la sheegay inay ku gorgortamayeen.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaana Warbaahinta u sheegay in uu guuldareystay dadaaladii uu hormuudka ka ahaa Madaxweynaha Galmudug.
Tan iyo xilligaa ma jirin cid kale oo ku dhiiratay inay u kala dab qaaddo Madaxda Qaranka, marka laga soo taggo in weli loogu baaqayo in ay khilaafkoodu xaliyan.
Xubno uu horkacayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, La-taliyaha Amniga Qaranka ayaa caweyskii xalay Madaxweyne Qoorqoor ku booqday hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu Madaxweyne Qoorqoor ka codsaday inuu dib u bilaabo wada hadaladii uu ku dhexdhexaadinayay labada dhinac, ha yeeshee uu ka cudurdaartay.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Hoggaamiyaha Galmudug uu ku andacooday inaanu mar kale isu howli doonin dhexdhexaadinta dad aanba diyaar u ahayn in horumar laga sameeyo waxyaabaha ay isku hayaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya inaanu Fahad Yaasiin Madaxweynaha Galmudug u muujin wax tanaasul ah oo Villa Somalia ay ka sameysay Taliska NISA iyo Wasiirka Amniga, waana sababta loo maleynayo inuu Qoorqoor uga cudurdaartay dib u bilaabidda dadaaladii uu garwadeenka ka ahaa.
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa 6-dii bishan waxa uu Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) uu si ku-meel-gaar ah ugu magacaabay Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA), halka laba cisho ka dib uu Cabdullaahi Maxamed Nuur u magacaabay inuu noqdo Wasiirka Amniga Gudaha. Ra’iisal Wasaaraha ayaa tallaabooyinkan u qaaday si ay cadaalad u helaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax, taasoo uu Villa Somalia ku eedeeyay inay hortaagan tahay.
Villa Somalia ayaa haatan ku gorgortamaysa in Ra’iisal Wasaaruhu ka tanaasulo magacaabidda Wasiirka Amniga iyo Taliyaha KMG ee Hay’adda NISA, kiiska Ikraan Tahliil-na lagu dhammeeyo wada hadal.
Fahad Yaasiin ayaa waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah inuu sii wado codsigiisan la xiriira inuu Madaxweyne Qoorqoor soo noolleeyo wada hadaladii fashilmay.
Previous articleWasiirka Qorsheynta Somaliya oo la kulmay bulshada Garoowe (SAWIRRO)
Next articleAjakis oo maanta ku geeriyooday Magaalada Muqdisho